३३ किलो सुन तस्कर प्रकरण : एसएसपी लोहनीलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश
माेरङ। सनम शाक्य हत्या काण्ड तथा ३३ किलो सुन तस्करी आरोपमा जिल्ला अदालत मोरङबाट पुर्पक्षको लागि जेल चलान भएका एसएसपी दिवेश लोहनीलाई उच्च अदालत मोरङले साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका शाखा अधिकृत राजप्रसाद दाहालले लोहनीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भएको जानकारी दिँदै उनी आजैदेखि रिहाई हुने बताए ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश नागेन्द्रलाभ कर्ण र शरद सुबेदीको संयुक्त इजलासले लोहनीलाई सादा तारेखमा राख्न आदेश दिएको दाहालले बताए ।
माेरङ। सनम शाक्य हत्या काण्ड तथा ३३ किलो सुन तस्करी आरोपमा जिल्ला अदालत मोरङबाट पुर्पक्षको लागि जेल चलान भएका एसएसपी दिवेश लोहनीलाई उच्च अदालत मोरङले साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश दिएको
गोरेको पक्राउ हो कि आत्मसमर्पण ? छानबिन समितिको दाबीमा प्रश्न उठ्यो !
काठमाडौं । मंगलबार बिहानै ५:३४ बजे कामनपा ८ गौरीघाटबाट करोडौँको सुन तस्करीका नाइके मानिएका गोरे अर्थात् चूडामणि उप्रेती पक्राउ परेको सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको विशेष समितिले गृह